Apple Inoburitsa iOS 11.1.2 yekugadzirisa Akawanda iPhone X Matambudziko | IPhone nhau
Muvhiki rese rino, mamwe matambudziko arikushungurudzwa nevamwe vashandisi achishandiswa nguva dzose neiyo X X, chinongedzo icho Apple yakaedza kudzorerazve iyo iPhone. Rimwe rematambudziko ratiri kutaura nezvaro rine chekuita nekushanda kwechiratidziri, chinovhara chinombomira kushanda kana chishandiso changoerekana chachinja tembiricha. Rimwe dambudziko rakanangana nekushanda kweiyo iPhone X rinotiratidza maratidziro anoita vamwe vashandisi imwe nzira yekukanganisa pavanoita mavhidhiyo kana kutora Mepikicha Mhenyu.
Semazuva ese, Apple haimbobvuma kana kutaura chero mhando yematambudziko, asi inoratidza izvozvo kana uchinetseka kuongorora chokwadi kana kwete chemhando idzi dzematambudziko. Kusiyana nezviitiko zvakapfuura, vakomana vanobva kuCupertino vanoita kunge vanga vachimhanyisa nguva ino kuvhura gadziriso kugadzirisa nyaya dzichangoburwa dzakatumirwa nevashandisi.
Iyi yekuvandudza, kuwedzera mukugadzirisa zvikanganiso zvidiki uye kugadzirisa mashandiro eIOS 11, inotarisana nekugadzirisa matambudziko anounzwa nechidzitiro kana ichinge yangoerekana yachinja tembiricha. Yakagadzirisawo dambudziko rekutsauka kana uchirekodha mavhidhiyo kana kutora mapikicha ehupenyu. Matambudziko ese ari maviri anongokanganisa iyo iPhone X, saka mune dzidziso iyi vhezheni Inofanirwa kungoburitswa yeiyo X X uye kwete yezvinhu zvese zvinowirirana neIOS 11.
Parizvino Apple iri kushanda paIOS 11.2, kunyanya mubeta rechitatu, beta yakavhurira vagadziri mazuva mashoma apfuura, uye ruzivo rwavo rukuru runowanikwa ne mukana wekushandisa 7,5w mawadhi asina waya ine mhando nyowani dze iPhone, mamodheru ayo ari kungoenderana chete nemadhija e5w asina waya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple Inoburitsa iOS 11.1.2 yekugadzirisa Akasiyana iPhone X Nyaya